Global Voices teny Malagasy » Misioka momba ireo fomban-drazana miavaka ao Japana · Global Voices teny Malagasy » Print
Misioka momba ireo fomban-drazana miavaka ao Japana
Voadika ny 15 Mey 2018 4:50 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fivavahana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Saribakoly Jizo  namboarina sy nolokoina nataon-tanana ao Obama, prefektioran'i Fukui. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Raha toa ianao ka liana te hahafantatra bebe kokoa momba ny sasany amin'ireo fomban-drazana taloha be tany Japana, vakio ny kaonty Twitter Unusual Festivals of Japan Club , (na ‘KFC’ raha hafohezina, ny ‘K’ dia fanafohezana midika hoe 奇 祭, kisai, na ‘tsy mahazatra’). Mandefa sioka imbetsaka isan'andro ny KFC, mandrakitra momba ireo fomba nentim-paharazana teo an-toerana tany Japana, izay efa maherin'ny arivo taona ny sasany amin'izy ireo.
Amin'ity fetibe mitranga ao amin'ny Saikanosy lavidavitra ao Noto, mandehandeha manodidina ireo toerana masina goavana azo bataina ireo lehilahy mamo mba hanamarika ny fiafaran'ny fijinjana.
Isaky ny 20 septambra, manatontosa ny fetibe ‘Okuma Kabuto’ ny toerana masina Kumakabuto Arakashihiko ao Nanao, Ishikawa. Toerana masina azo entin-tanana milanja 1 taonina miaraka amin'ny andry 20 metatra antsoina hoe orsa ‘wakuhato’ Sarutahiko Okami (iray amin'ireo ‘kami lehibe enina’ amin'ny Shinto ). Ny zava-nisongadina tamin'io andro io dia ny fijerena ireo orsan'ny toerana masina mirohotra eny an-tendrombohitra mba hamoaka ilay andriamanitra ao amin'ny efitra lehibe indrindra amin'ny toerana masina.
Azo jerena ao amin'ny Youtube ireo sarin'ny fetibe, tahaka ny maro hafa izay noraketin'ny KFC:
Fetibe iray hafa ny fankalazana ny Sugawara no Michizane, andriamanitra mitoetra ao Tenman-gu , toerana masina iombonana hita ao amin'ny faritra maro ao Japana. Tao amin'ity toerana avaratr'i Japana ity, mahatsiaro an'i Sugawara no Michizane amin'ny alalan'ny fisotroana misaron-tava ireo mpandray anjara amin'ny fetibe:
‘Fetim-Biby” Yamagata (Bakemono no Matsuri, 25 Mey isan-taona): Fetibe Sugawara no Michizane , toerana masina Tenman ao Tsuruoka, prefektioran'i Yamagata. Taorian'ny fandraràna an'i Sugawara no Michizane (taorian'ny didim-pitsaran'ny fitsarana teo amin'ny 1000 taona lasa izay), voalaza fa novain'ny mpanara-dia azy ny endrik'izy ireo rehefa niara-nisotro, natahotra ny ampifandraisina taminy. Amin'ity fetibe ity, misotro sake mangingina na zava-pisotro mangatsiatsiaka no sady mandihy ireo mpandray anjara.
Toerana masina azo bataina, antsoina hoe mikoshi, no mitana anjara toerana lehibe amin'ny fety japoney. Ity fetibe iray any Uji, ao amin'ny prefektioran'i Kyoto ity, dia manasongadina ny mikoshi izay mibata Brahma-Deva, andriamanitra mpiaro manan-danja ao amin'ny Bodisma Japoney.
Kyoto Agata matsuri: tontosaina isan-taona manomboka amin'ny 5 jona ka hatramin'ny faran'ny volana (antsoina koa hoe kurayami kisai, na ‘fombafomba matroka’). Ny mpikarakara ny fetibe dia mitatitra ‘Brahma-Deva’ (bonten, 梵天), andry bararata miaraka amin'ny taratasy boribory izay atao toy ny toeram-pivavahana azo bataina. Manozongozona ny andry avy any ankavia miankavanana ireo mpanatrika rehefa mandehandeha mandritra ny alina.
Ny tranonkala Green Shinto , loharanom-baovao mahazatra hatrany momba ny vako-drazana nentim-paharazana Japoney, manazava izay mitranga mandritra ny fizotran'ny fetibe:
Nisy sambo roa, samy nentina teo an-tsandrin'ireo lehilahy tao happi. Nanana endrika shishsi masiaka (liona Shinoa) ny iray ary mitabataba hoe ‘yoiya, yoiya’ ireo lehilahy. Ny iray hafa kosa maneho an'i Bonten, kami mpiaro ny Boddhisma asehon'ny andry misy soratra amin'ny taratasy fotsy. (Araka ny filazan'ny biraon'ny toerana masina ao amin'ny doany Agata, rehefa nafindra tao amin'ny sambo ny andriamanitra, dia niova ho Bonten izy.) Nihiaka ireo lehilahy teto hoe: ‘Washoi, washoi.’ Satria nentina teny amin'ny manodidina ny sambo, nitsangana teny amin'ny farany ambony ny iray tamin'ireo lehilahy ary nihazona ny andry tamin'ny ilan-tanana, niafina tao amin'ny sora-baventy an-taratasy ny lohany, ary ny tanana iray kosa nihinjitra amin'ny fomba miaro […]
Azo jerena ao amin'ny Youtube ny lahatsary fohy tamin'ny fetibe:
Mandray anjara lehibe amin'ny vakoka Japoney ny fosa. Iray amin'ireo andriamanitra malaza indrindra any Japana ny Inari, andriamanitra fosa, maneho ny vintana tsara, ny harena amam-boninahitra sy ny fahavokarana:
Fetiben'ny Yamaguchi Inari: Isaky ny 3 Novambra, dia misy ny “fampakaram-badin'ny fosa” (kitsune no yomeiri) atao ho an'ny fosa (andriamanitra) omen-kasina ao amin'ny toeram-pivavahana Hanafukutoku Inari, mba hanantenana fahavokarana sy fanambinana. Safidin'ny mponina eo an-toerana ny anjara asan'ny ampakarina sy ny mpampakatra, ary ireo izay milalao ny anjara asan'ny ampakarina dia lazaina ho kandidà sahaza ho an'ny fanambadiana amin'ny mahamendrika ny hetsika. Na izany aza, ny mombamomba ny ampakarina sy ny mpampakatra dia tazonina ho tsiambaratelo.
Efa taloha be ny sasany amin'ireo fetibe asongadin'ny KFC. Ity fetibe ity any amin'ny faritanin'i Nara atsimo ity dia efa mihoatra ny arivo taona ary mifandray amin'ny vavaka an-tendrombohitra  ao amin'ny faritra.
Fetiben'ny Nara Fitsambikinan'ny Sahona (kaeru tobi), 7 Jolay: Iray amin'ireo hetsika maro fanao isan-taona ho fankalazana ny fombam-pivavahana rengekai isan-taona ao amin'ny tempolin'i Kimpusen ao Nara. Nisy lehilahy nanendrikendrika andriamanitra iray teo an-toerana , ary vokatr'izany, nisy voromahery lehibe nanantona azy teo an-tampon'ny tendrombohitra. Rehefa nahita ilay lehilahy sy namindra fo taminy, nanova azy ho sahona ny pretran'ny tempolin'i Kinpusen mba hahafahany midina ny harambato ary hiverina eny amin'ny olombelona indray.
Manome fijery amin'ny antsipirihany bebe kokoa momba ity fetibe natokana ho an'ny sahona mitsambikina ity lahatsary ity.
Manasongadina ireo fomban-drazana malaza any ambanivohitr'i Japana, toy ny “bull sumo” na tolon'omby  ny kaonty Twitter KFC.
Uwajima, Ehime bull sumo (ushi-zumo): Tontosaina imbetsaka isan-taona, miatrika ny lanonana sumo amin'ny fifaninanana iray-sy-iray ny omby. Omena laharana ireo omby, ary tsy misy fe-potoana mandritra ny fifaninanana. Ireo ombilahy izay mamoy ny ainy sy miezaka mitsoaka no resy. Ho fampiononana, mitaky ny vola loka izay omby resy.
Fomban-drazana iray hafa mahaliana nofariparitan'ny kaonty KFC ny fomba fanao Okinawan taloha iray dia ny hajichi, na ny tombokavatsa nentim-paharazana.
‘Hachiji’ Okinawa: Noho izy anisan'ny fomba amam-panao tohizan'ny vehivavy eo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny teloambinifolo taona any Okinawa, any amin'ny faritra atsimo andrefan'i Japana, asiana tombokavatsa ny tanana mba hanamarinana ny fandalovana eo amin'ny fahatanorana, ary koa (amin'ny taona manaraka) ho porofon'ny fanambadiana. Heverina ho lamaody sy mahafinaritra ireo tombokavatsa, ary ankalazaina miaraka amin'ny fianakaviana ny fotoana fanaovana tombokavatsa voalohany.
Nanjavona hatramin'ny fiafaran'ny Ady Lehibe Faharoa ity fomba fanao ity, saingy manome tontolo mahaliana momba ny hachiji  i Lex McClellan, izay manoratra ao amin'ny Medium.
Fomba amam-panao hafa eny amin'ny faritra asehoan'ny kaonty KFC ny fomba fanaon'ny Yomeburi, izay mitranga any amin'ny morontsirak'i Japana , any amin'izay toerana rehetra ahatrarana buri, trondro hohanina mahazatra mandritra ny ririnina any Japana. Ny sary ao anaty sioka dia avy amin'ny sarimiaina manga sy ny andian-tsarimiaina Zazavavin-drano ny vady ampakariko  (瀬戸の花嫁 ).
(Sarimiaina mampiseho zatovovavy manana tavan-trondro)
Fetibe Toyama Yomeburi: Amin'ity fetibe ity, rehefa miala ao an-trano mba ho lasa vady ny zanaka vavy, mandefa buri (karazana trondro) fanomezana faran'ny taona ho an'ny fianakavian'ny mpampakatra ny fianakavian-dravehivavy, ho fanantenana fahombiazana eo amin'ny fiainana. Ny buri dia tokony ho be valarana sy lehibe araka izay azo atao. Any amin'ny toeram-panjonoana any Himi, Toyama, lazaina fa matavy loatra ny buri ary ny tavy no mankaloa saosy soja.
Mandefa imbetsaka momba ny vakodrazana [rehefa vakoka fa tsy hoe hira ihany] Japoney isan'andro ny kaonty Twitter KFC . Raha amin'ny teny Japoney matetika ireo sioka, ny sary ihany no manome topi-maso mahavariana momba ny fiainana Japoney.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/15/119162/
 iray amin'ireo ‘kami lehibe enina’ amin'ny Shinto: https://en.wikipedia.org/wiki/Sarutahiko_%C5%8Ckami
 Sugawara no Michizane: https://en.wikipedia.org/wiki/Sugawara_no_Michizane
 vavaka an-tendrombohitra: http://www.greenshinto.com/wp/2017/10/22/mountain-spirituality/
 Nisy lehilahy nanendrikendrika andriamanitra iray teo an-toerana: https://www.visitnara.jp/venues/E02049/
 izay mitranga any amin'ny morontsirak'i Japana: http://www.genkaiya.com/buri/yomeburi.html
 Zazavavin-drano ny vady ampakariko: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_My_Bride_is_a_Mermaid_episodes